တရုတ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအသုံးချမလား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတရုတ်ကိုအသုံးချမလား - သရ၀ဏ်(ပြည်) | dawnmanhon
တရုတ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအသုံးချမလား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတရုတ်ကိုအသုံးချမလား - သရ၀ဏ်(ပြည်)
နိုင်ငံရေးတွင်ထာဝရရန်သူမရှိ ထာဝရမိတ်ဆွေမရှိ ၊ထာဝရအကျိုးစီးပွားသာရှိသည် ဟူသောဆိုရိုးစကားတခုရှိသည် ။ ထိုဆိုရိုးစကားကြောင့် ရန်သူတွေ မိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြသည် ။ မိတ်ဆွေတွေရန်သူဖြစ်သွားကြသည် ။ထိုဆိုရိုးစကားကိုတရုတ်ပြည်ကလက်တွေ့ ကျင့်သုံးသောအခါ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(ဗကပ)ကျဆုံးခန်းသို့ ရောက်သွားသည် ။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကိုယခင်က တရုတ်အစိုးရအဆက်ဆက်အားပေးထောက်ခံခဲ့သည် ။ ထောက်ခံရာတွင်ဝါဒရေးရာ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ၊ နိုင်ငံရေးရာတို့ တွင်ထောက်ခံသည်သာမကစစ်ရေးအထောက်အပံ့အကူအညီများစွာပေးခဲ့သည် ။ မြန်မာအစိုးရကိုလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ဖြင့်ဖြုတ်ချကာ ကွန်မြူနစ်အစိုးရ အောင်ပွဲခံနိုင်ရန် တရုတ်ပြည်အစိုးရသည် လက်နက်အင်အားအပြည့်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည် ။ အချို့တိုက်ပွဲများတွင် တရုတ်တပ်သားများကို ဗကပ၀တ်စုံဝတ်ပေးကာ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဝင်တိုက်ပေးခဲ့သည် ။ သို့ သော် ကြာကြာဝါးမှခါးမှန်းသိဆိုသလို ဗကပ တို့သည် ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်စစ်ရေးအောင်မြင်မှုကိုဘာမှမပြနိုင် ။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်းလူထုထောက်ခံမှု ထိုးကျနေသည် ။ နောက်ဆုံးတွင် တရုတ်အစိုးရသည် ဗကပတို့ကိုထောက်ပံ့အားပေးနေခြင်းဖြင့် ငွေကုန်လူပန်းဖြစ်ရုံကလွဲ၍ တရုတ်ပြည်အတွက်အကျိုးမရှိပုံကိုသိမြင်လာပြီး ဗကပတို့အားထောက်ပံ့မှူကိုရပ်စဲလိုက်သည် ။ နှစ်ပေါင်းများစွာလက်တွဲလာသော ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့်လမ်းခွဲလိုက်ပြီး အာဏာရအစိုးရဖြစ်သောမြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရ ၊ထို့နောက် န.၀.တ/န.အ.ဖ စစ်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်လမ်းစဉ်ကိုအကွက်ရွှေ့ သည် ။ ထိုအချိန်မှစကာ ဗကပအဖွဲ့အင်အားချည့်နဲ့လာကာ တဖြည်းဖြည်းလုံးပါးပါးသည် ။တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည် တရုတ်၏အထောက်အပံ့မရပဲကြာရှည်မရပ်တည်နိုင် ၊ ၀အဖွဲ့နှင့်ကိုးကန့် အဖွဲ့များသည်လည်းတရုတ်အထောက်အပံ့ဖြင့် ရှင်သန်ကြီးထွားလာကြခြင်းဖြစ်သည် ။ တရုတ်တို့က ဖိအားပေးလာပါက ထိုအဖွဲ့များရပ်တည်ရေးသည် ခက်ခဲသွားပေလိမ့်မည် ။ နောက်ဆုံးတွင် ဗ.က.ပလိုကျဆုံးရပေလိမ့်မည် ။တရုတ်သည်ဒါကိုနိုင်ကွက်တကွက်အဖြစ်ကိုင်ထားသည် ။ ထို့နောက် တရုတ်၏အကျိုးစီးပွားများမြန်မာအစိုးရနှင့်ပေါင်းကာ ပြည်တွင်းသို့ တစိမ့်စိမ့်ဝင်ရောက်လာသည် ။မြန်မာစစ်အစိုးရကလည်း နိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုတခုအတွက် တရုတ်အစိုးရကိုအလွန်အကျွံအားကိုးခဲ့ကြသည် ။ တရုတ်သည် နိုင်ငံရေးမှာသာမက စီးပွားရေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားလေသည် ။ ထိုစဉ်ကတရုတ်အစိုးရ၏ မိတ်ဆွေမှာ စစ်အစိုးရဖြစ်သည် ။ NLD နှင့် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများကို ရန်သူအဖြစ်မဟုတ်တောင် ခပ်စိမ်းစိမ်းဆက်ဆံသည် ။ အဆက်အဆံမလုပ်သလောက်ဖြစ်သည် ။
သို့ သော်တရုတ်ကအလွန်လည်သည် ။ တရုတ်ပြည်သည်စီးပွားရေးအလွန်တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် ၊ သယံဇာတလိုအပ်ချက်၊ကုန်ကြမ်းလိုအပ်ချက်အင်မတန်ကြီးမားလာသည် ။ ထိုအခါ သံဇာတကြွယ်ဝသောအိမ်နီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံ၏အရေးပါမှုကိုကောင်းကောင်းသိသည် ။ စစ်အစိုးရကျဆုံးသွားခြင်း၊ စစ်အစိုးရကြောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံဖြိုးရေးပါတီ လူထုထောက်ခံမှုကျဆုံးကာ အစိုးရအဖြစ်မှဆင်းပေးလိုက်ရခြင်း တို့သည် တရုတ်၏ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်ကိုတနည်းတဖုံပြောင်းစေသည် ။ သူတို့ပြောင်းလဲလိုက်တာက ရိုးရိုးလေးဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံရေးတွင်ထာဝရမိတ်ဆွေမရှိဆိုသည့်အတိုင်း စစ်သားလူထွက်များကြီးစိုးသော ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနှင့်အဆက်အဆံခပ်ကျဲကျဲလုပ်လိုက်သည် ။ အစိုးရဖြစ်လာသော NLD ပါတီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်သော ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများကိုချက်ခြင်း မိတ်ဆွေကောက်တော်ပစ်လိုက်သည် ။ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကိုပင် တရုတ်တို့ကမိတ်ဆွေအဖြစ်ကောက်ကာငင်ကာသတ်မှတ်၍ လေ့လာရေးတွေဘာတွေ ခေါ်ကာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြလိုက်သည် ။ တကယ်တော့တရုတ်၏မူဝါဒမပြောင်းလဲပါ ။ သူတို့မူဝါဒမှာ နိုင်ငံရေးအာဏာရှိနေသူ နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ရေးဖြစ်သည် ။ ထိုဝါဒအရ တ.စ.ည ပါတီတက်လာလျှင် တ.စ.ည ကိုလူရာသွင်းမည်ဖြစ်သည် ။ NDF တက်လာလျှင် NDF ကို မိတ်တွေဖွဲ့မည်ဖြစ်သည် ။ ၈၈ မျိုးဆက်တွေအာဏာရလာလျှင် ကိုကိုကြီး၊မင်းကိုနိုင်တို့နှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကာဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ချစ်ကြည်ရေးတွေဘာတွေကြွေးကြော်ဦးမည်ဖြစ်သည် ။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီပြန်လည်အနိုင်ရလျှင် နဂိုထဲကခင်မင်ခဲ့သော အစ်ကိုကြီးညီလေးတွေဖြစ်ကြဦးမည်ဖြစ်သည် ။တက်လာတဲ့အစိုးရငါ့အစိုးရဟူသော (မြန်မာအခေါ်သာကူး)မူဝါဒသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏မူဝါဒဖြစ်သည် ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူ၏အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကြောင့်ဖြစ်သည် ။မြန်မာသည်ဘာသယံဇာတမှမရှိသော ကျွန်းနိုင်ငံသေးသေးလေးသာဖြစ်လျှင် မြန်မာကိုဤသို့ တူတူတန်တန်အလေးထားဆက်ဆံမည်မဟုတ်တာသေချာပေသည် ။
သေချာသည်ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသည် မက်လောက်စရာ သယံဇာတတွေ ၊ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေ ၊စီးပွားရေးလုပ်ကွက်တွေ၊ ပင်လယ်ထွက်ပေါက်တွေ ရှိနေတာဖြစ်သည် ။ မြန်မာနှင်.တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးသည် ဒေါ်လာဘီလီယံ ၁.၄ ခန်.ရှိပါ၏ ။ ဤအရေအတွက်ကားမှောင်ခိုကုန်သွယ်ခြင်းမပါသေး ။တရားမ၀င်သစ်ခိုးခုတ်ခြင်းတို.မပါဝင်သေးပါ ။တရုတ်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေကမ်းလွန်ဒေသတွင်ရှိသောမြန်မာ. သဘာဝဓါတ်ငွေ.သိုက်ကိုလည်းလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားနိုင်သည် ။ တရုတ်သည်မြန်မာအားငွေများထုတ်ချေး၏။အကြွေးများပေး၏။ အပြန်အလှန်အားဖြင်. တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်မှမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကမ်းမြောင်အထိ ၂၃၈၀ ကီိုမီတာရှည်သောပိုက်လိုင်းကြီးကိုဖြတ်သန်းတည်ဆောက်ခွင်.ရခဲ.၏ ။ ဧရာဝတီနှင်.သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင်ရေကာတာများပိတ်ဆို.တည်ဆောက်ခွင်.ရခဲ.၏။ China National Offshore Oil Corporation နှင်.China National Petroleum Corporation တို.သည် မြန်မာ.ရေနံများကိုသန်.စင်မှု အဆင်.မြှင်.တင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ဆောင်ရန် အရေးပါသောလုပ်ခွင်.ကန်ထရိုက်ရခဲ.ပြီး ထွက်လာသောရေနံများကိုပါအချိုးကျခွဲဝေယူခွင်.ရရှိခဲ.သည် ။ Patro China ကုမ္မဏီသည် ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေလုပ်ကွက် (၁) မှ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်အထိ ရေနံနှင်.သဘာဝဓါတ်ငွေ.ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ခွင်.ရခဲ.သည် ။
ထိုအရာတွေကြောင့်တရုတ်သည်မြန်မာနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အဝေးမှဥရောပနိုင်ငံများလိုမာမာကြောကြော မဆက်ဆံ ၊ အမြဲတမ်းမြန်မာနှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းရန်ကြိုးစားလေ့ရှိသည် ။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်ငါးနိုင်ငံတွင်ပါဝင်သော တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာအတွက်ဆိုလျှင် အမြဲတမ်း ရှေ့တန်းမှမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ခဲ့သည် ။ သုံးခဲလှသောဗီတိုအာဏာကိုပင် မြန်မာအတွက်ဆိုလျှင် ဖောဖောသီသီသုံးပေးခဲ့သည် ။ မကြာသေးမီကာလများက ရခိုင်အရေးနှင့်ပတ်သက်သော ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆွေးနွေးပွဲများတွင် တရုတ်၏ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ရှုတ်ချပြစ်တင်သော မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှ မချနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရသည် ။ Non binding ခေါ်ဥပဒေအရစည်းနှောင်မှုမရှိသော (မလိုက်နာလည်းဘာမှမဖြစ်သော ) ကြေညာချက်များသာထုတ်နိုင်ခဲ့သည် ။ ထိုသို့ကာကွယ်ပေးခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံကိုအနောက်တိုင်းသားများ ၊ ကုလသမဂ္ဂတို့ဝင်ရောက်ခြေရှုပ် မှာကိုစိုးရိမ်၍ဖြစ်သလို တရုတ်တို့၏အကျိုးစီးပွားအတွက်မြန်မာနှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ တရုတ်တို့မြန်မာထံမှအမြဲတမ်းအလိုရှိနေသည်မှာ မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းပြန်စဖို့ဖြစ်သည် ။ ထိုစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်ဖို့တရုတ်တို့ဘက်ကဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟုပြောထားခဲ့ဖူးသည် ။ China Power Investment Corporation ကလည်းမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအတွက် ဒေါ်လာ ၃.၆ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည် ။ ထို.ကြောင်.စီမံကိန်းကိုလွယ်လွယ်နှင်.အလျှော.ပေးမှာမဟုတ် ။
နိုင်ငံရေးတွင်တိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာရှိခဲသည် (ရှိလေ့မရှိ) ။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တရုတ်နှင့်မြန်မာကြားထူးခြားမှုသုံးခုဆက်တိုက်ဖြစ်သည် ။ပထမတခုမှာ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ၀မ်ယီ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသည် နိုဝင်ဘာ ၂၁ နှင့် ၂၂ တွင်ကျင်းပမည့် အာရှ-ဥရောပ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည် ။ သို့ သော် မစ္စတာဝမ်ယီသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိစဉ် သမ္မတဦးထင်ကျော် ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအာင်လှိုင်တို့ နှင့်ဆက်တိုက်တွေ့ ဆုံခဲ့သည် ။ တနည်းပြောရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်အာဏာအရှိဆုံးလူသုံးဦးနှင့် နိုဝင်ဘာလ၁၉ ရက်တနေ့တည်းတွင် တယောက်ပြီးတယောက်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။တကယ်တော့ အာရှ-ဥရောပအစည်းအဝေးက ၂၁ ရက်နေ့မှစတင်သော်လည်း ၂ ရက်ကြိုရောက်လာခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှအရေးအပါဆုံးခေါင်းဆောင်သုံးဦးနှင့်တွေ့ ဆုံဖို့ ဆိုတာထင်ရှားလေသည် ။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ရီတို့တွေ့ ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး ၊ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလုံခြုံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နေမှုများကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်သည် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ။တခုတည်းသောရပ်ဝန်း တခုတည်းသောလမ်းကြောင်း( One Belt –One Road ) စီမံကိန်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး တို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည် ။
“တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရွယ်အစား၊အင်အား အလွန်ကွာခြားပေမယ့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နားလည်မှုရှိတဲ့နေရာမှာ တူညီတဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့အတူ မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေဖြစ် ကြပါတယ် “ ဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည် ။
ဒုတိယထူးခြားချက်မှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့်အဖွဲ့သည်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်နေပြည်တော်တွင်တွေ့ ဆုံပြီး (၂)ရက်အကြာ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးအလည်အပတ်ခရီးထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည် ။တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နှင့် ပူးတွဲစစ်ဦးစီးဌာနစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Li Zuocheng ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည်နိုဝင်ဘာ ၂၁ရက်နေ့နံနက်တွင်နေပြည်တော်လေဆိပ်မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ။ ထိုခရီးစဉ်တွင် တပ်ချုပ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှအကြီးအကဲများနှင့်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊တရုတ်နိုင်ငံရှိစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်းများ၊စက်ရုံများနှင့် အထင်ကရနေရာများ အားလှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းများဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုသိရသည် ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရုတ်ခေါင်းဆောင်များကအလေးထားကြောင်းပြသသည့်အနေဖြင့် တရုတ်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နှင့် ပူးတွဲစစ်ဦးစီးဌာန စစ်ဦးစီးချုပ်က ပေကျင်း၌ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆိုခဲ့သည် ။ တရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်အတွင်းဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်ေးအာင်လှိုင်သည် တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတစီကျင်းပင်နှင့်လည်းတွေ့ ဆုံခဲ့သည်။ခရီးစဉ်အတွင်းသတိထားမိသည်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မြစ်ကြီးသုံးသွယ်ရေကာတာ( Three Gorges Dam) သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တရုတ်ပြည်မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင်မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ရောက်လာ၏ ။
တတိယထူးခြားမှုအဖြစ် နောက်တနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တရုတ်နိုင်ငံသို့အလုပ်သဘောချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက်မည်ဟူသောကြေညာချက်ထွက်လာပါသည် ။ ယခုခရီးစဉ်ပါထည့်တွက်လျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားခြင်းမှာ တတိယအကြိမ်ဖြစ်သည် ၂၀၁၆ သြဂုတ်လအတွင်းကတကြိမ်၊ ၂၀၁၇ မေလကတကြိမ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တရုတ်နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားပြီးသားဖြစ်သည် ။ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလကုန် (သို့မဟုတ်)ဒီဇင်ဘာလဆန်းတွင်ထပ်သွာဲး့လျှင်ရှားရှားပါးပါး တနှစ်ထဲ တရုတ်ပြည်သို့နှစ်ခေါက်သွားသော မြန်မာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပေမည် ။တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့်ပြည်ပနိုင်ငံရေးပါတီများအကြားအဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်များဆွေးနွေးပွဲ သို့ တက်ရောက်ရန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးမြှင့်တင်ရန်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်တရုတ်နိုင်ငံသို့ အလုပ်သဘောချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတေ်ာအတိုင်ပင်ခံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်သည် ။
ဤကိစ္စသည် စဉ်းစားဖွယ်ဖြစ်၏ ။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကပြည်ပနိုင်ငံရေးပါတီအဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆွေးနွေးပွဲဟုဆိုထားရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လောလောဆယ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ NLD ပါတီလုပ်ငန်းများကိုဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရပ်နားထားရရာ NLD ပါတီအဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်အနေနှင့်သွားလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်ပေလိမ့်မည် ။ တကယ်ဆိုလျှင်ပါတီခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ဦးဝင်းထိန်၊ ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်စေ ၊ အတွင်းရေးမှူးများဖြစ်စေသွားရမည်ဖြစ်သည် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လောလောဆယ်ပါတီလုပ်ငန်းများဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိသဖြင့် ပါတီခေါင်းဆောင်အနေနှင့် သွားခွင့်မရှိပေ ။ ဖိတ်သည့်ခေါင်းစဉ်ကလည်းမရှင်းမရှင်းဖြစ်နေသည် ။ပြည်ပမှနိုင်ငံရေးပါတီအဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်များနှင့်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီတွေ့ ဆုံပွဲ ဟုလည်းအမည်တပ်ထားသည် ။ အလုပ်သဘောဟုလည်းပါသေးသည် ။ အကယ်၍ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်နိုင်ငံတော်တာဝန်ဖြင့် အလုပ်သဘောအရ နိုင်ငံတော်၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် တရုတ်ပြည်သို့ သွားခဲ့လျှင်တော့ အခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်ခြင်းမရှိပေ ။ ပါတီခေါင်းဆောင်အနေနှင့်သွားလျှင်တော့ အခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်ဖောက်ဖျက်မှုအဖြစ် စွပ်စွဲခံရနိုင်ပေသည် ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ ပြည်ပပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ ဆုံပွဲသို့ ဖိတ်သည်ဆိုခြင်းမှာတရုတ်တို့ဘက်မှအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ ခေါင်းစဉ်တပ်ခြင်းဖြစ်သည် ။ ဖြစ်နိုင်သည်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို မြစ်ကြီးသုံးသွယ်ရေကာတာခေါ်ပြပြီး မပြီးပြတ်သေးသောစကားများအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထပ်ခေါ်ကာ မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့ နှပ်ကြောင်းပေးစည်းရုံးလို၍ဖြစ်နိုင်သည် ။ ထိုအတွက် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ၀မ်ယီ နေပြည်တော်သို့ရောက်လာကာ ကြီးသုံးကြီးဖြစ်သော ( ၊ သမ္မတကြီးဦးထင်ကျော် ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နှင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမေစု၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ) ထင်၊စု၊လှိုင်ကိုလာရောက်တွေ့ ဆုံသွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည် ။ ၀မ်ယီလာပြီးနောက် တပ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တရုတ်ပြည်သို့ ထွက်သွားသည် ။ ထို့ နောက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရက်ပိုင်းအတွင်းသွားမည် ။ တိုက်ပဲတိုက်ဆိုင်လွန်းလှသည် ။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများတွင် အဆုံးအဖြစ်ပေးနိုင်သော ( Decision Maker )ဖြစ်သည် ။ သို့ သော် မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းပြန်စဖို့ဆိုလျှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တယောက်တည်းနှင့်မပြီးနိုင် ။ ထိုကိစ္စအတွက် အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်သူ ( Decision Maker ) မှာ မြန်မာပြည်တွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်ပဲရှိသည် ။ တနိုင်ငံလုံးကဆန့်ကျင်နေသောလက်ပန်းတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြားဝင်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ရာ ကြီးမားသော လူထုဆန့်ကျင်မှုမရှိတာ့ပဲ ပြေလည်သွားဖူးသည် ( တရုတ်တို့အောင်ပွဲရဖူးသည် ) ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နောက်တွင်ပြည်သူလူထုရှိသည် ။ အနည်းဆုံးအားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာပဲဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေ ထောက်ခံမည့် NLD ပါတီဝင်များရှိသည် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသာ မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကိုအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းဖြင့် ပြန်လည်စတင်လိုသည်ဆိုလျှင် NLD ပါတီဝင်များက လက်ခံကြမှာသေချာသည် ။ပြည်သူလူထုကလည်း လက်ခံကြလိမ့်မည်ဟု (လက်ပန်းတောင်းတောင်စီမံကိန်းကိုအတုယူ၍) တရုတ်တို့ စဉ်းစားဟန်ရှိသည် ။ မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုလက်ခံခဲ့သူမှာ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများဖြစ်သည် ။ ခေတ္တဆိုင်းငံ့သည်ဟုမရှုပ်မရှင်းလုပ်ခဲ့သူမှာလည်း တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရဖြစ်သည် ။ ဒီကိစ္စတွင်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများပါဝင်ပါတ်သက်မှုကြီးမားနေသည် ။တပ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများနှင့်တရုတ်တို့ချုပ်ဆိုခု့သော မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းစာချုပ်ကိုလည်းပြည်သူလူထုသို့ယခုတိုင်ချမပြသေးချေ။ထို့ကြောင့် လက်ရှိတပ်မတော်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုခေါ်၍တိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း၊အကြံဥာဏ်တောင်းခြင်းတို့ ရှိနိုင်သည် ။ ထိုမှတဆင့်တက်ကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တနှစ်အတွင်းနှစ်ကြိမ်တိတိ (မည်သည့်နိုင်ငံခြားခေါင်းဆောင်ကိုမှတနှစ်အတွင်းတရုတ်ပြည်သို့ နှစ်ကြိမ်ချစ်ကြည်ရေးခရီးမဖိတ်ဖူးပဲ) အဖိတ်ထူးကာ ဖိတ်ခေါ်တာလားဟုတွေးမိလေသည် ။ ပြောရလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နိုင်ငံရေးသြဇာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရှိန်အ၀ါကိုတရုတ်ခေါင်းဆောင်များကမြစ်ဆုံဆည်ရေကာတာစီမံကိန်းအတွက်အသုံးချနေခြင်းလားဟု သံသယပွားမိပါသည် ။
ယခုအခါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွင်လည်း နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်၍အခက်အခဲပေါင်းစုံနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် ။ ဥရောပသမဂ္ဂ။အမေ၇ိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာနှင့်ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်တို့အား ဘင်္ဂလီကိစ္စ ရခိုင်ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖိအားများစွာပေးနေချိန်ဖြစ်သည် ။ မကြာသေးမီရက်များက ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနှင့်ပါတ်သက်၍ အစ္စလာမ်မစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့( OIC ) ဦးဆောင်တင်သွင်းသော မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာမူကြမ်းကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ လူမှုရေး၊ လူသားချင်းဆိုင်ရာထောက်ထားမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မမတီ(တတိယကော်မတီ)တွင် ထောက်ခံမဲ ၁၃၅ မဲ ၊ကန့်ကွက်မဲ ၁၀မဲ ၊ကြားနေမဲ ၂၆ မဲ ၊ မဲမပေးသောနိုင်ငံ ၂၂ နိုင်ငံ တို့ဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ကြသည် ။လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုလူ့အခွင်းအရေးကော်မတီခံတွင်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတင်ပြဆွေးနွေးကြပေဦးမည် ။ ထိုအချိန်တွင် မြန်မာဘက်မှ အားကိုးစရာမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်မည့်နိုင်ငံမှာ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ရုရှားနိုင်ငံ နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများသာရှိတော့သည် ။ ထိုအခြေအနေတွင်တရုတ်က သူ၏ကြီးမားလှသော အရေးပါအရာရောက်မှုကိုအသုံးချကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံမှ မြစ်ဆုံသဘောတူညီချက်ကို ရဖို အသုံးချလာနိုင်ပေသည် ။
စဉ်းစားကြည့်ပြန်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်း ထိုအရေးကိုမမြင်ပဲနေမည်မဟုတ် ။သူသည် အလွန်လိမ္မာပါးနပ်သောနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်သည် ။ တရုတ်တို့ နှင်ပူးပေါင်းနေခြင်းသည် တိုင်းပြည်အပေါ်ကျရောက်နေသော နိုင်ငံတကာ ဖိအားများ ၊ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုများ ကိုလျော့ပါးသက်သာအောင် တရုတ်တို့အားအသုံးချနေခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်အနောက်တိုင်းတွင်ကြီးပြင်းနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ရာ အချိန်တန်လျှင် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ကာသဟဇာတဖြစ်သွားမည်သာဖြစ်သည် ။ ယခုပြသနာများမှာလည်း ဘင်္ဂလီအကြမ်းဖက်သမားများ ဂြိုဟ်မွှေသောကြောင့် တပ်မတော်အပေါ်အနောက်နိုင်ငံများအမြင်မကြည်လင်ရာမှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပါရောယောင်ပြစ်တင်ရှုတ်ချနေကြခြင်းဖြစ်ပေသည် ။ ဒါဆိုလျှင်နိုင်ငံတကာဖိအားများ လျော့ပါးအေးချမ်းသွားချိန်အထိ တရုတ်တို့နှင့် အပေါ်ယံဟန်ပြ ချစ်ကြည်ရေးလုပ်နေသလားဟုလည်းတွေးမိပေ၏ ။ ဒေါ်အာင်ဆန်းစုကြည်ကတရုတ်တို့ကို မြန်မာ့နိုင်ငံအရေးအတွက် အသုံးချနေခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပေသည် ။ မကြမီသောကာလတွင်မည်သူကမည်သူ့ ကို အသုံးချနေသလဲဆိုတာ ကာယကံရှင်တို့၏ ကာယကံ ၊၀ဇီကံတို့မှတဆင့်ပေါ်ပေါက်လာပေလိမ့်မည် ။ ဘာပဲပြောပြော နိုင်ငံရေးတွင်ထာဝရမိတ်ဆွေ ၊ထာဝရရန်သူမရှိ၊ထာဝရအကျိုးစီးပွားသာရှိသည်ဆိုတာကို ယခုအချိန်တွင်တော့ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်ရော ၊ မြန်မာဘက်မှနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရော ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ကြမှာတော့အသေအချာပင်ဖြစ်ပါပေ၏။
dawnmanhon: တရုတ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအသုံးချမလား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတရုတ်ကိုအသုံးချမလား - သရ၀ဏ်(ပြည်)